Home > Migrant Communities Library Guide > Somali services
Maktabad kastoo Wellington ku taalla waxay leedahay buugaag, majallado, Suxuun Muusiko iyo DVDyo, waxaana yaalla miisaas iyo kuraas ay macaamiishu isticmaali karaan si ay wax ugu dhigtaan.
Buugaagta intooda ugu badan waxaa la soo haysan karaa muddo afar todobaad ah, laakiin Suxuunta Muusikada (CDs), majalladaha iyo DVDyada waxaa la soo haysan karaa muddo hal todobaad ah.
Si aad Wax u qaadato
Waxaad u baahan doontaa inaad is-qorto (akhbaar dheeraad ah oo ku saabsan is-qorista) oo aad soo qaadato kaarka maktabadda ee gaar kuu ah. Is-qorista maktabaddu waa u bilaash dhammaan dadka ku nool Magaalada Wellington, xataa carruurta.
Kaarkaaga maktabadda ayaad isticmaali kartaa si aad wax uga qaadato mid kastoo ka tirsan laamaha maktabadda.
Haddii aad Wellington dibaddeeda ku nooshahay (sida tusaale ahaan magaalada Hutt City, Porirua, Paraparaumu) ama maktabadaha xaafaddaada ayaad intaad is-qortid wax ka qaadan kartaa, ama waxaad is-qori kartaa Wellington. (akhbaar dheeraad ah oo ku saabsan sida aad isu-qori kartid haddii aad magaalada Wellington dibaddeeda ku nooshahay).
Marka aad wax qaadato, maktabad hayahu waxuu ku siin doonaa waraqad yar. Waxaa ku taxan waxyaabaha aad qaadatay waxayna muujinaysaa waqtiga lagaa sugayo inaad waxyaabahaas u soo celiso maktabadda. U soo celi dhammaan waxyaabaha aad qaadatay maktabaddii aad ka qaadatay ka hor waqitga la xiro maalinta lagaa sugayo inaad soo celiso. Haddii kale lacag ayaa lagaa qaadi doonaa. (akhbaar dheeraad ah oo ku saabsan lacagaha ay maktabaddu dadka ka qaaddo)
Haddii aad lumiso ama khasaare u geysato buug maktabaddu leedahay waxaa muhiim ah inaad maktabadda la xiriirto. Lacag ayaa lagaa qaadi doonaa, haddii aad bixin weydona wixii deyn ah ee kugu maqan waxaa loo gudbin doonaa shirkad soo-uruurisa deymaha (debt collection company).
Si aad Akhbaar u Hesho
Shaqaalaha maktabadda ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan. Waxaad weydiisan kartaa caawimo si aad u hesho buug, majallad, Saxan Muusiko (CD) ama DVD aad doonaysid inaad qaadatid, ama wax baad ka waraysan kartaa. Adeeggan caawimadu waa bilaash.
Buugga liis-garaynta ee Maktabadda waxaa ku taxan dhammaan waxyaabaha maktabadaha yaalla ee la qaadan karo. Halkan ka baar buugga liis-garaynta Shaqaalaha weydiiso inay ku tusaan sida loo isticmaalo.
Haddii uu macmiil kale hore u qaatay welina haysto waxa aad rabtid, liiska sugayaasha ayaad magacaaga ku dari kartaa. Marka uu qofkaasi waxaas soo cesho, maktabadda ayaa kula xiriirin doonta si aad markaas u soo doonato. Dadka mudakirka ah waxaa laga qaadaa $2. Xubin shaqaale weydii sida wax loo sii-qabsado.
Mararka qaar maktabaddu waxay rabi doontaa inay kula soo xiriirto - tusaale ahaan, si ay kuugu sheegto inaad soo doonan kartid buug laguu sii hayay. Waxaa dhici karta inay ku soo wacdo mashiin telefoon ah oo si otomaatik ah u shaqaysa. Haddii aad u malaynaysid inuu lambarkaagu qaldan yahay waxaa muhiim ah inaad maktabadda la xiriirto (801-4040).
Cusboonaysiinta waxyaalaha aad amaahatay
Waad cusboonaysiin kartaa waxyaalahaaga aad amaahatay hal mar ee muddada ammaahda oo dheeraad ah. Weydiiso xubin shaqaale ah markaad timaaddo maktabadda, ama ka cusboonaysiiso intarneedka markaad ka eegto kaarkaaga maktabadda www.wcl.govt.nz/card. Markii khulaasadda amaahdaadu soo baxdo, eeg khaanadaha ku dhinac-yaal waxyaalaha aad doonayso inaad waqtiga dheeraysato waxaadna riixdaa batanka 'renew items' – shaashadda ayaa ku tusi doonta taariikhaha markaad soo celinayso waxyaalaha aad cusboonaysiisatay.
Muddooyinka amaahdu way kala duwan yihiin ayadoo ku xiran hadba nooca walaxda – ka eeg boggayaga borrowing page wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan muddooyinka amaahda, ama weydii maktabad-hayaha. Waxyaalahaaga lama cusboonaysiin karo haddii macaamiil kale sii-ceshadey (reserved). Haddii walaxda aad cusboonaysiinayso ay leedahay ujradda kirada (sida DVD-yada dadka waaweyn), waxaa lagaa dooni doonaa inaad bixiso ujradda kirada oo kale si aad walaxda u sii haysato muddo dheer.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeeggan, weyddii maktabadda degaankaaga.
Waxaad hadda codsan kartaa in codsiyada waxyaalaha aad riserfigarasanayso ama kaa dhacay waxaad ku soo sheegi kartaa email-ka. Waxa keliya oo aad u baahan tahay inaad samayso waa adigoo soo buuxiya online form ama weydiista maktabadda degaankaaga.
Websaytka Maktabadda iyo Internetka
Websaytka Maktabaddu waa www.wcl.govt.nz waxaa ku jira waxyaabo badan oo la isticmaali karo.
Maktabadaha Wellington dhammaantood waxaa yaalla kumbiyuutarro internet bilaash ah leh kuwaasoo la isticmaali karo si loo booqdo bogagga internetka ee dawladda NZ (oo ay ku jirto Wasaaradda Socdaalka (Department of Immigration).
Websaytka Maktabadda waxaa laga heli karaa akhbaar hagid ka bixinaya mawduucyo gaar ah sida waalidnimada, ganacasiga. Qaybaha qaarkood si aad u gasho waxaad u baahan doontaa inaad eray sir ah ku qorto (iyo lambarka kaarkaaga maktabadda) si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey sida wargeyska South China Morning Post.